Phakathi nohambo lwabo lwasolwandle abathintekayo lonke uhlelo zemisipha. Yikuphi imisipha abasebenza lapho uzulazula futhi kanjani ukuthuthukisa imisipha? Lo mdlalo kungenziwa kubhekwe enhle ukugcina umzimba isesimeni esihle ngokomzimba. Ababhukudi cishe njalo ukuma bephelele futhi evuthiwe senhliziyo esilimele kanye uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi iyonke. Futhi enkulu plus ukubhukuda.
Kuyini ukusetshenziswa ukubhukuda
Ukubhukuda Kunconywa odokotela utholakala cishe kuwo wonke iziguli abafuna ukuletha impilo yabo ukuze. Ngaphambi uyaqonda ukuthi yini amaqembu kwemisipha ukusebenza ngesikhathi ubhukuda, kubalulekile ukuba sicabangele kanye nokusebenzisa lolu hlobo ezemidlalo impilo.
Ukuba echibini isekela kahle kwegazi igazi futhi kukhulisa wamaphaphu umthamo. Ukubhukuda - cishe ezemidlalo kuphela kusenza sisebenze zonke izinhlobo imisipha. Futhi ayizingcweti zokubhukuda acishe never unezinkinga wokugaya ukudla.
Nge umzimba njalo kubantu kwandisa ukukhuthazela, kwandisa kwebhande ehlombe, futhi umzimba uhlale isesimweni esihle futhi kufanelekile. Akunandaba lapho umuntu ebhukuda. Ukuze embuzweni: iyini imisipha ukuba isebenze kodwa uma ebhukuda pool, ungaphendula ngokungananazi. Leli chibi ukusebenza emacenjini abo imisipha njengoba lapho ebhukuda olwandle.
Imisipha ababhukudi ukusebenza
Lapho umuntu aphinde abhukude abuyele, usebenzela omunye amaqembu kwemisipha yanjalo eyodwa noma. Nomdlalo eyakhelwe ubuhlungu imisipha ukungezwani, futhi ngenxa yalokho eqinisa kwenzeka sonke isikhathi.
Yikuphi imisipha abasebenza at ukubhukuda? Imisipha emlenzeni wokuqala. Phakathi uvakashelwa njalo echibini incipha ezinqulwini iqinisa imisipha bebonke. Futhi ngesikhathi ukunyakaza kuthiwa imisipha izingalo, ngemilenze namahlombe njalo sisebenzela. Kancane kancane, umuntu uqala ukwandisa kwebhande ehlombe. In amadoda, lesi sibalo kuba wesilisa.
Ungakhohlwa ukuthi ngamunye isitayela ekhethiwe kuthinta amaqembu kwemisipha ngamunye. Ngakho-ke, uma umuntu uye wanquma ukuqinisa iqembu elithile imisipha, kumelwe ukhethe ngokucophelela isitayela ukubhukuda, okuyinto evumelana naye.
izitayela ezikhona futhi ehileleke imisipha
Ngakho lapho imisipha ukuba isebenze kodwa ngenkathi ubhukuda kuncike isitayela?
Lapho ekhetha freestyle ogxile ingalo imisipha ukusebenza futhi latissimus.
Uma lo msubathi eduze ukukhasa esifubeni sakhe, khona-ke ehilela cishe zonke izicubu, Nokho, iningi ukusebenza kwebhande ehlombe.
Lapho ebhukuda the ukukhasa ngemuva umuntu bazibandakanye kakhulu latissimus dorsi.
Butterfly kwenza kusebenta ngekukhutsala zonke imisipha imilenze, izingalo kanye obliques. Umuntu ngenkuthalo swings cindezela.
ewusizo Ikakhulukazi ukubhukuda Breaststroke. Yikuphi imisipha abasebenza nalo isitayela ukubhukuda? Uma Breaststroke umbhukudi ekhetha, ubizwa isebenza imisipha emuva. Ikakhulukazi ithuthukiswe kahle rhomboid, trapezoid, kanti nemisipha latissimus.
Khetha isitayela evumelana umsubathi esithile, kubaluleke kakhulu. Nokho, odokotela batusa kakhulu ukusebenzisa izitayela enye. Ngakho kungenzeka ukuba ningabi nje kuphela kancane kancane ukuqinisa umzimba wonke, kodwa futhi ukudonsa ukuma futhi sithuthukise impilo yakho. Ngaphezu kwalokho, nge alternation izitayela izimo zivuma uphumule umzimba kancane ngesikhatsi ukunyakaza.
Guqula izibalo at trainings njalo
Uma abantu baqala sihlanganyele emidlalweni lokwenza ngcono izibalo, wayihlukumeza kakhulu masinyane, ubuza umbuzo: lokho imisipha abasebenza at ukubhukuda? Eqinisweni, akufanele sizikhohlise bese ulinda Imiphumela ngokushesha, ngisho ne ukusebenzisa avamile.
Ngezinye umthwalo njalo mass imisipha ngeke zikhula kancane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, le ndoda abasoze bakwazi ukufeza imiphumela enjalo, njengoba ekilasini, ezifana weightlifting, noma weightlifting. Kepha cishe ubalekela adipose kwezicubu bangamaphesenti yabasubathi "omisiwe".
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi lapho uzulazula a kangaka okuthiwa ukuma esingunxantathu. Ithole ejimini ayisebenzanga, ngakho ababhukudi abaqeqeshiwe lubonakale ngokushesha.
Futhi, ningawenzi ulinde akhishwa cindezela, esifubeni kanye triceps. Lezi imisipha achazwayo kuphela uma amandla imithwalo futhi cishe akukho msebenzi ukubhukuda. Uma wayefisa, okungukuthi ukufeza bobunjwa futhi kumelwe ungibonise ejimini. By the way, lohlanganisiwe ithonya elihle empilweni yomuntu.